Aretina diabeta Mitombo isa ireo marary eto Madagasikara
Fitehirizana fanafodim-baksiny Mila hatsiaka 2° C ka hatramin’ny 8°C
Natomboka omaly alarobia 17 janoary manerana ny Nosy, haharitra hateloana ny fanaovam-baksiny faobe iadiana amin’ny aretina lefakozatra ho an’ireo ankizy latsaky ny dimy taona.
Fanadiovana an’i Toamasina Efa nanomboka afak’omaly
Mavesatra ny takaitra navelan’i AVA ao Toamasina. Tapaka efa ho 5 andro ny jiro sy ny rano ka ireo olona manana milina mpamokatra herinaratra ihany sisa no nahita mazava sy afaka nihaino radio.
Fanadiovana faobe Tontosaina anio tontolo andro
Tantontosaina anio tontolo andro fanadiovana faobe manerana an’i Madagasikara mba hiadiana amin’ny aretina Pesta, araka ny didim-panjakana laharan 2017-1156; andro tsy iasana kanefa handraisan-karama noho izany ny anio 10 janoary 2018.
Fanadiovana tanàna taorian’i AVA Mila vanona amin’ireo fikambanana hafa ny HVM
Tsy nitaza-potsiny ny loto sy fako ary ireo tapa-kazo mameno ny tananan’i Toamasina ny fikambanana sosialy FIMAMI na Fikambanana Malagasy Mijoro, notarihan’ny filoham-boninahiny ny senatera Benesy Harison Sebastien, sy ny filohan’ny fikambanana Mananjara Auguste,
Rotorotom-piainana sy fahasahiranana Miombo isa ny Malagasy matin’ny AVC
Miha mitombo isa hatrany Malagasy matin’ny aretin’ny fahatapahan’ny lalan-dra any amin’ny loha n any AVC (accident vasculaire cérébral) araka ny filazan’ny mpitsabo.Ny adintsaina mafy loatra mivadika ho rarin-tsaina na “Stress” no mahatonga azy io, ka ireo olona monina sy miasa an-tanan-dehibe no tena maro an’isa voany.
Fahavaratra, rano miakatra Fotoanan’ny aretin-kibo, tokony ho mailo ny rehetra
Ny vanim-potoanan’ny fahavaratra tahaka izao no fotoanan’ny aretin-kibo noho ny habetsahan’ny ranon’orana sy ny fiakaran’ny voankazo maro samihafa eny an-tsena. Mila mailo ny tsirairay manoloana izany, raha araka ny fanazavan’ny dokotera Fidy Bariniaina.
Ankazomanga Atsimo Tsy misy andraso andraso ny fanadiovana
Mitohy ny fanadiovana ny lakandrano samihafa eto Antananarivo Renivohitra. Raha namonjy fotoam-pivavahana maraina ao amin’ny FJKM Ankazomanga ny Ben’ny
Olona iray isaky ny fito segondra no voalaza fa mamoy ny ainy manerana izao tontolo izao vokatry ny aretina diabeta mahazo azy.
Tafakatra hatrany amin’ny 5,1 tapitrisa isan-taona izy ireo raha atotaly ka ireo eo anelanelan’ny 40 ka hatramin’ny 59 taona no tena maro an’isa. Ny antony, raha ny fanadihadiana natao ny fihinanana sakafo tsy ara-pahasalamana toy ireo be menaka, mamy loatra, arahin’ny tsy fampiasam-batana izay ilaina tokoa na dia 30 minitra isan’andro ihany azy. Ho antsika eto Madagasikara manokana dia fantatra fa tsy mitsaha-mitombo ireo olona manatona tobim-pitsaboana ary fantatra fa voan’ny aretina diabeta izay miseho amin’ny endrika maro. Anisan’ireny ny faharerahana be loatra, ny hanoanana lava... Toraka izany koa ireo zaza vao teraka izay voan’ny diabeta sahady aretina nateraky ny tsy fahatombonana nandritra ny fiforonany mbola tany am-bohoka. Hankalazaina anio talata 14 novambra ny andro maneran-tany iadiana amin’ny aretina diabeta, daty napetraky ny sampandraharaha iraisam-pirenena momba ny fahasalamana. Hisy, araka izany, ny fanentanana sy fampahafantarana momba ity karazan’aretina iray ity hotanterahin’ireo tobim-pitsaboana maro isan-karazany eto an-drenivohitra toy ny Amadia eny Faravohitra.